Cristiano Ronaldo oo kaga badan Messi iyo Raul isku-dar goolasha ay ka dhaliyeen siddeed dhammaadka Champions League!! – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo kaga badan Messi iyo Raul isku-dar goolasha ay ka dhaliyeen siddeed dhammaadka Champions League!!
(Europe) 12 Abriil 2019. Cristiano Ronaldo ayaa Champions League ka dhaliyay gool kale uu muhiim ah kaddib markii uu Madaxa ku dhaliyay goolka qura ay Juventus habeen hore ka dhalisay ciyaartii ay barbaraha 1-1 la galeen Ajax, taa oo ka dhigan inuu noqday laacibka ugu goolasha iyo guulaha badan tartamada Yurub oo idil.
Guud ahaan waa laacibka ugu goolasha badan Champions League oo 125-gool ayuu ku dhaliyay 161-kulan.
Haddaba Cristiano Ronaldo ayaa ka goolal badan wadar ahaan inta gool oo ay Lionel Messi iyo Raul ka dhaliyeen siddeed dhammaadka Champions League.
Ronaldo ayaa siddeed dhammaadka Koobka horyaalladda Yurub ka dhaliyey 24 gool, taasoo ka badan Messi iyo Raul oo min 10 gool ka dhaliyey wareeggan, CR7 ayaana 4 gool dheer labadoodaba marka ay sheekadu taagan tahay heerka siddeed dhammaadka.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa 64-gool ka dhaliyey wareegyada bug-baxa Champions League waana in saddex gool dheer goolasha uu ka soo dhaliyay wareega Guruubyada tartankan ee 61-gool.
23-gool wuxuu ka dhaliyay wareegga 16-ka Champions League, 24-gool wareega siddeed dhammaadka, 13-gool wareega afar dhammaadka (Semi-final), halka uu 4-gool ka dhaliyay ciyaaraha kama dambeysta ee Final-ka tartankan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xiddigaha goolaha ugu badan ka dhaliyey siddeed dhammaadka Champions League CR7 ayaana hoggaaminaya:-
KOOXDA ISBUUCA EE UCL: 11-kii xiddig ee ugu bandhigga fiicnaa todobaadkan Koobka Horyaalladda Yurub oo lagu dhawaaqay